» दिवंगत साहित्यकार अप्सरा तिम्सिनाको जीवनमा आधारित वृत्तचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार १३:४७
मकवानपुर, १३ साउन । मकवानपुरकी चर्चित साहित्यकार दिवंगत अप्सरा तिम्सिनाको जीवनमा आधारित वृत्तचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । महेन्द्र ओझाको छायाँकन र सम्पादनमा निर्माण भएको वृत्तचित्रको पुरा भाग केही दिनमा नै एनएस टेलिभिजन युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक हुनेछ । वृत्तचित्रमा चर्चित साहित्यकार अच्यूत घिमिरेले स्वरांकन गरेका छन् । हेर्नुहोस् वृत्तचित्रको ट्रेलर–
जीवनमा अनेकौँ आरोह अवरोह आउँछन् । अनेकौँ दुःखहरुलाई भोग्नु पर्छ अनेकौँ सुखको अनुभूतिमा रमाउनु पर्छ । जीवन चक्र हो घुमिरहन्छ । विभिन्न स्वरुपहरु धारण गर्दै जीवन चलिरहन्छ र जीवनको अन्त्य एकदिन सत्य हुन्छ । सत्य आफैँमा सत्य हो सत्यलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन जन्मनु र मर्नु बिचको जति बाँचेको जीवन हुन्छ त्यो चाहि रङ्गमञ्च भएर अभिनय गरिरहन्छ । यही रङ्गमञ्चमा अभिनय गदागर्दै जीवनको अभिनय सकिन्छ ।
जन्मनु जीवनको उज्यालो पक्ष हो त्यही पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै वि.सं. २०३२ कार्तिक २७ गते ओखलढुङ्गामा आमा जसोदा तिम्सिना र बुबा गजाधर तिम्सिनाको एक मात्रै छोरीको रुपमा धनकुमारी तिम्सिना जन्म भयो । त्यहीको माटो, खोला, पाखा पखेरा डुल्दै घुम्दै उहाँको बाल्यकाल त्यतै बित्यो । छोरीले पढ्न नपाउने अथवा पढ्यो भने समाज र बाआमाको इज्जत जाने बेलामा पनि समाजको त्यो परिधिलाई नाघेर उहाँले २०५१ सालमा एस.एल.सी. पास गरेर पढ्ने कामलाई निरन्तरता दिनुभयो । र अझैँ पढ्ने उत्साहलाई थप बलियो बनाउनकोेै लागि हेटौँडा प्रवेश गर्नु भयो ।
हेटौँडा क्याम्पसबाट कक्षा ११ देखि एम एडसम्मको अध्ययन गर्नु भएकी धनकुमारी तिम्सिनाले आफैँले रोजेको नाम थियो अप्सरा तिम्सिना । २०५२ सालदेखि श्री बालउज्जवल मावि लेवटमा अध्यापनमा संलग्न हुँदै आउनु भयो र एक असल शिक्षकको रुपमा धेरै पटक पुरस्कृत पनि हुनु भयो । उहाँ विद्यालयमा शिक्षक हैन अभिभावक बनेर आफ्नो विद्यार्थीहरुको साथी बनिरहनु भयो र जीवनको अन्तिमसम्म पनि उहाँले त्यही विद्यालयमा पढाउनु भयो ।
पचासको दशकमा साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएकी अप्सरा तिम्सिनाले २०६० सालमा बैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नु भयो एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिनु भएकी अप्सराले घर परिवार बालबच्चाको उल्झनलाई सम्हाल्दै आफ्नो जागिरे जीवन र आमाको भूमिका एक असल बुहारी र कर्तव्यनिष्ठ श्रीमतीको बनेर गृहस्थी जीवन कुशलतापूवक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि पर्नु भएन । लगभग १० वर्ष साहित्यको क्षेत्रबाट ओझेल परेको देखिएता पनि विभिन्न भूमिकामा भित्रि रुपमा उहाँले साहित्यका पुस्तकहरु पढिरहने र लेख्ने कामलाई निरन्तररता दिन भने छाड्नु भएन त्यसैले पनि साठीको दशकबाट विभिन्न सामाजिक तथा साहित्यिक संघसंस्थामा सक्रिय रुपमा सहभागि भै सेवा गरिरहनु भयो र वि सं २०६९ सालमा नारी साहित्यकारहरुको साझा संस्था आँचल साहित्य कला पुञ्जको स्थापना गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु भै संस्थापक उपाध्यक्ष बन्नु भयो । र पछि दुइ कार्यकाल अध्यक्ष भै आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रुपले निर्वाह गर्नु भयो ।
मकवानपुर जिल्लाकै पुरानो तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य संगम मकवानपुरलाई आफ्नो साहित्यिक पाठशाला मान्ने अप्सराले सोही संस्थामा सदस्यदेखि उपाध्यक्ष भएर कार्य गर्नु भयो । सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरको कोषाध्यक्ष, भीम विराग संगीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्ष, मातृभूमिको आजिवन सदस्य, प्रलेश मकवानपुरको साधारण सदस्य रहेर जहाँ जहाँ उहाँले अग्रस्थानमा काम गर्न पाउनु भयो त्यहाँ आफ्नो कुशलताको उदाहरण पस्किनु भयो ।किनाराका आवाजहरु २०६७ अभ्यन्तर कथा संग्रह २०७६ प्रकाशित गरिसक्नु भएकी अप्सरा तिम्सिनाले अर्को कविता संग्रह र उपन्यासमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन अग्रसर भएको पाइन्छ । उहाँको भान्छे कविता सबैभन्दा बढी मन पराइएको कविता हो । भान्छेका ६ वटा सिरिजहरु लेखिसक्नु भएको छ भने अन्य कविताहरु पनि नेपाली साहित्यमा उल्लेखनिय भूमिका रहेका छ । अप्सरा तिम्सिना कवि कथाकार मात्रै हैन एक कुशल समिक्षक र गीत लेखनको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान महत्वपूर्ण छ । साहित्य साधना तथा सक्रियताका लागि विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गर्नु भएको थियो ।